သုက်ပိုးအရေ အတွက် နည်းပါးသည့် အမျိုးသားများ နာမကျန်းမှုဘေးဥပဒ် တိုးပွား - Yangon Media Group
သုက်ပိုးအရေ အတွက် နည်းပါးသည့် အမျိုးသားများ နာမကျန်းမှုဘေးဥပဒ် တိုးပွား
သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးသည့် အမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေးဘေးဥပဒ် ပိုမိုတိုးပွားဖွယ်ရှိကြောင်း သုတေသနအသစ်တစ်ခုက ယူဆခဲ့သည်။ အမျိုးသား ၅၁၇၇ ဦး ကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုရာတွင် သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးသည့် အမျိုးသားများ အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်စထရော မြင့်တက်ရန် ရာခိုင်နှုန်း ၂ဝ ပိုမိုနေသည်ဟု သိရသည်။
သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးခြင်းနှင့် သုက်ပိုးအရည်အသွေးပြဿနာသည် ဇနီး မောင်နှံ သုံးစုံတွဲတွင် တစ်တွဲတွင် ကိုယ်ဝန်ရရှိရန် ပြဿနာရှိတတ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အလားတူပင် သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးသော အမျိုးသားများမှာ ကိုယ်တွင်းဇီဝ ဖြစ်ပျက်မှုရောဂါလက္ခဏာ ရှိနိုင်သကဲ့သို့ သွေးပေါင်ချိန် မြင့်တက်စေကြောင်း၊ ယင်းသည် ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်း ဘေးဥပဒ်ကို တိုးပွားစေသည်ဟု ဆိုသည်။
သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးသော အမျိုးသားများတွင်ြ<ွကက်သားပမာဏ လျော့ကျ ခြင်း၊ အရိုးသိပ်သည်းမှု လျော့ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေ၍ အရိုးပွရောဂါဘေးဥပဒ်ကို တိုးပွား စေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ မျိုးအောင်ခြင်းမရှိသောအမျိုးသားများသည် ကျန်းမာရေးဘေးဥပဒ် ကို တိုးပွားစေသကဲ့သို့ ဘဝအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေ၍ အသက်တိုစေနိုင်ကြောင်း သုတေသနအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာအယ်လ်ဘတ်တိုဖယ်လင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥရောပထိပ်တန်း လိဂ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံး ဂိုးသမားစစ်တမ်းတွင် စပါးဂိုးသမား လိုရစ် ??
စားသောက်ဆိုင်နှင့် စူပါမားကတ်တို့မှ ယူဆောင်လာသော နေ့လယ်စာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် မူဝါဒအသစ်ကြောင့် မြဝတီမြို့တွင် နယ်စပ်လုပ်ငန်းသုံး Delivery Van တရားဝင?
လူမှုစံနှုန်း ခြောက်ချက် ချိုးဖောက်နေသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့်များကို ဖျက်သိမ်း အရေးယူသွားမည
အာဖဂန်နစ္စတန် အစိုးရက တာလီဘန်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ ဒေါ်လာသန်း ၂ဝဝ တန်ဖိုးရှိ သကြားစက်ရုံနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်??
မန်ယူအသင်းကို အောင်မြင်မှုများ ပြန်ယူပေးနိုင်ကြောင်း မာရာဒိုနာ ဆို
ဘရတ်ပစ်နှင့် လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုတို့ ပါဝင်ထားသည့် ‘Once UponaTime in Hollywood’ ရုပ်ရှင်ကို အိန္ဒိယတွင် သြဂုတ် ၁၅ ရက် ရုံတင်မည်
ဘာသာစကားတစ်ခု ပျောက်ဆုံးခြင်းသည် တိုင်းပြည်တန်ဖိုးရှိသော ရတနာတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ??